Skype kasoo horjeeddo waqti Face
Juun 11, 2020 by Facetime Guide Leave a Comment
Wada xiriir wanaagsan ayaa muhiimada muhiimadda in dunida maanta. Ama aad rabto in aad la hadasho saaxiibada iyo qoyska ama aad dooneyso inaad ku xiran shaqaalaha ganacsigaaga, aad u baahan tahay qalab kaamil ah oo kaa caawin kara in aad buuxiya shuruudaha aad.
In la soo dhaafay, dadka in ay sameeyaan mails inaad la xiriirto dadka kale loo isticmaalaa, laakiin hadda dadka ay jecelyihiin in ay sameeyaan CHAT video iyada oo dhufto ee video chat. Wixii xiriir waxgal ah, shirkadaha badan ayaa bilaabay apps taleefoonka video ay tahay in la oggalaado in aad meel ku baaqay in meel kasta dunida dacaladeeda.
Ka mid ah, kuwaas oo dhan software interactive, laba apps mar walba oo Tumeeya dareenka dunida. Labadan apps xafiiltanka waxaa si weyn loo aqoonsaday Face Time iyo Skype.
Waxa xiiso leh, labada apps (Face Time iyo Skype) waxaa loogu talagalay ujeeddo oo isku mid ah in maamulka dadka isticmaala si ay u hesho bulsho firfircoon, dhigi audio ama video calls, samayn fariimaha qoraalka ah, wacaan group video iyo wax ka badan.
Waxaad si fudud u isticmaali kartaa Chine, kuwaas oo ku saabsan qalabka kala duwan oo ay ku jiraan casriga ah aad, kiniiniyada, desktop, daaqadaha, watch hadal, iPod iyo qaar badan oo.
Kuwani apps video chat ka dhigteen halboowlayaal u fududahay oo dhan isticmaala inay xiriiriso kasta oo kale ilbiriqsi gudahood eegin gobolka, Masaafada ama waqti. Waxa ay ka dhigtay in ay suurto gal ah in aad ku raaxaysan fasaxa ama ay diiradda saaraan aad safar ganacsi by joogtid lala qoyskaaga, shaqaalaha ama macaamiisha. Labada apps waa mid aad u qaadi karo, macaamiisha saaxiibtinimo iyo maarayn karo.
laakiin weli, waxaa jira qaababka kala oo kala Chine, kuwaas oo ka mid kale. In this article, waxaad ka heli doontaa fikrad faahfaahsan of sifooyinka tartan rasmi ah, heerka waafaqid, is-dhexgalka, iyo tayada labada Skype iyo Face Time. Maqaalkani waxa uu sii dayn doonaa inaad go'aansato dacwana software ayuuna sida ay baahidaada.
0.2 Dhignaashada ee Skype:
1 Features ee Skype
1.1 Midaynta Skype
1.2 Tayada Skype:
1.4 Dhignaashada ee Face Time:
2.1 Midaynta Face Time:
2.2 Feature Tayada Face Time:
2.3 Inbadan oo ka socda goobtayda
Mid ka mid ah barnaamijyadooda shirarka video ugu badan oo ugu hawl badan waa Skype. App Tani ayaa markii hore lagu bilaabay in 2003 oo dhawr sano ka dib 2011 Shirkadda Microsoft iibsaday. Microsoft sameeyey heshiis this ee $8.5 billion. Fikradda asaasiga ah ee software tani waa in ay u ogolaadaan isticmaalayaasha in ay ku fuliso video aan xad lahayn oo ku baaqay in audio.
Waxaa intaas dheer in this, Skype ayaa sidoo kale bixisaa in ay macaamiisha adeegyada ee fariimaha qoraalka ah oo la dareen soo jiidasho leh iyo stickers. Skype ayaa mar walba diirada u gudan looga baahan yahay in ay macaamiisha ee. Maaddaama ay natiijooyinka ay natiijo wax ku ool u janjeedha, Skype ayaa la kulantay guul weyn.
Iyada oo ay qeexitaanka sare ee audio iyo video calls, Skype ayaa soo jiitay inta badan saamiga ku baaqay caalamiga ah. Iyada oo intaas oo dhammu waxay adeegyo cajiib ah, Skype ayaa si guul leh u suurtagashay in ay magaca ka dhigi in maxkamad maxkamad kala duwan iyo ogeysiisyada.
Dhignaashada ee Skype:
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee Skype waa, app this u shaqeeya qalabka kala duwan. aadan in aad sii kooban halka la isticmaalayo this video app shirarka. The dalab iyo adeegyada ee Skype daraan dhammaan qalabka ay ka mid yihiin telefoonada gacanta, daaqadaha, kombiyuutarada, kiniiniyada, iyo qalabka kale ee ciyaarta madal.
Sababo la xiriira adeegyada ay u baaxad weyn iyo waafaqid, Skype ayaa macaamiisha badan ee Sony, Play Station, casriga ah, daaqadaha, qalabka OS X, Android, BlackBerry, Symbian, Samsung Smart TV, iwm.
Features ee Skype
Markii hore, Skype waxaa loo qorsheeyay in ay bixiyaan calls doorasho audio in ay macaamiisheeda. Laakiin ka dib markii baahida sare iyo isbeddellada la beddelo ee isgaarsiinta, waxaa ka dib bilaabay bixiya fariimaha iyo video calls dagdag ah dunida.
Si ka duwan Face Time, Skype aan loogu talagalay in ay bixiyaan video online oo kaliya ama ay wicitaanada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo wacdo qof teleefoonka guriga ama kan lambarada. Habkaani waa run ahaantii waxtar leh si ay u gaaraan dadka oo dhan halkaas oo internet ku waa miskiin ama gaabis.
Waayo, video online ama wicitaanada, Skype wax kharash. Laakiin haddii aad rabto in aad soo wacdo lambarka caalami ah, tirada mobile ama lambarka telefoonka guriga, markaas waa inaad bixiso lacagta rukun ah. Skype bixisaa qorshaha soo jiidasho leh in heshiiska wicitaanada offline.
Heerarka kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay in aad gobolka iyo lacagta. Waxaan ka fiirsan kartaa Skype sida kale ee landline laakiin weli, app this ma noqon karaan ciddii beddesha. Mid ka mid ah sababta ugu weyn waa haddii aanad samayn karin wicitaanada degdegga ah iyada oo loo marayo Skype.
Si aad u dhaqaajiso Skype, waxaad isticmaali kartaa internet Wi-Fi ama aad xogta network gacanta. Si aad u bilaabin isticmaalka Skype, waa in aad haysato aad Microsoft email id ama Skype ID. Marka aad login doonaa in aad xisaabta Skype, waxaad ka heli doontaa liiska xiriir ah taas oo hore u hayo by software ah.
Waa inaad u guji user aad rabto in aad soo wacdo. Waxaad ka raadin kartaa mid ka mid ah xiriirada la doonayo by magaciisa ama magaceeda in bar raadinta qoraal. Waxaad samayn kartaa liiska xiriirka ugu isticmaalay by iyaga oo intaa ku daray in ugu cadcad.
Inta aad video call, Skype waxay bixisaa fursado badan oo ay ku jiraan carrab call, camera ku biiro, cod-keliya mode iyo telefoonka. Skype sidoo kale in dadka isticmaala ay bixiyaan adeegyo aad u Fariin interactive.
Waayo gaarka ah, Skype kuu ogolaanayaa inaad si loo joojiyo ama tirtirto xiriir. Waxaa intaas dheer in this, waxa kale oo aad u fasaxaya in ay iska indha codsi fariin isticmaalka kasta haddii aadan aqoon inaad isaga ama iyada.
Ama aad tahay user OS X ama user macruufka; waxa aad heli kartaa cinwaanka aad buugaagta iyo xiriirada adigoo isticmaalaya Skype. Skype gudbin kartaa wicitaanada in tiro kasta oo aad rabto in aad. Waxaad ka abaalmarinayn adeegan by iibsiga credit Skype. Skype gebi ahaanba waa madal a video shirarka u ogolaanaya dadka isticmaala aaladaha kala duwan si aad u xiran iyadoo la isticmaalayo software hal.
Nasiib darro, Skype ma bixiyaan tayada wanaagsan ee audio iyo video calls. Mararka qaar, xataa haddii aad isticmaalayso internet-xawaaraha sare, waxaad weli u wajihi karaan xallinta hoose iyo shuttering calls video.
arrimahan ka sii adag tahay haddii aad isku daydo in ay isticmaalaan inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa Skype. Sababta dhabta ah waa, Skype waxaa bixiya adeegyada ay qalabka oo dhan iyo sabab u tahay tirada aan xad lahayn ee dadka isticmaala, wajahaya arrin tayo leh. Waxa ugu wanaagsan waa koox ka mid ah Skype ayaa ka shaqaynaysa si loo xaliyo arrintan in la sameeyo macaamiisha ku qanacsan.
Face Time waa mid ka mid ah software caan ah in had iyo jeer ka dhigaysa dadka isticmaala ay ku faraxsan oo ku qanacsan. software video taleefoonka Tani ayaa la bilaabay by Apple ee 2011. software Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay si ay u sameeyaan u fududahay dadka isticmaala qalab Apple oo ay ku jiraan iPad, iPhone, iPod, iyo Macs inuu sii joogo Haydadda by riyaaqayaa video iyo maqal isdhexgalka.
Face Waqtiga waa uu ku riyaaqayaa waslad weyn ee macaamiisha ku qanacsan. Sida laga soo xigtay baadhitaanka, in ka badan 70 million OS X users iyo macruufka users qaadato gargaarka ee Face Time in ay la hadlaan dadka kale ee.
Dhignaashada ee Face Time:
Waxaad la socon kartaa software this on aaladaha Apple oo kaliya. Waa in aad haysataa qalabka Mac ama macruufka ah kamaradaha hore u soo jeeda si ay u bilaabaan aad call video iyada oo Waji Time. Face Time ayaa waafaqid kooban oo ay tahay oo kaliya qalabka Apple heli karo. Waxaad bilaabi kartaa adigoo isticmaalaya Face Time haddii aad leedahay mid ka mid ah kuwan soo socda
iPad 2 ama ka dib,
iPhone 4 ama ka dib
4Qarni th iPod ama ka dib
Mac OS X 10.6.6 iyo ka dib
In kiiska qalabka aad aadan haysan camera ah ee loo dhisay, markaas waa in aad ku soo lifaaq ah camera web dibadda si ay u bilaabaan samaynta calls video.
Markii hore, Face Time macaamiisha u oggolaanaya in ay faaiido adeega ay adigoo isticmaalaya xidhiidhada network WiFi oo kaliya. Laakiin la horumarinta iyo horumar of technology, waxa uu ogol yahay macaamiisha si ay u ordaan app this adigoo isticmaalaya macluumaadka shabakadaha gacanta iyo sidoo kale.
Mid ka mid ah faa'iidada tartanka ee Face Time waa, ma ka duwan Skype in aad maraan habka maaraynta xisaab aad. waxaad Marka bilaabin isticmaalka Face Time, waxaa si toos ah midaynaysa iyo synchronizes oo dhan xogta loo baahan yahay cinwaanka buugaagta iyo xiriirada macruufka iyo users OS X.
Face Time waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Marka aad riixdid batoonka in ay meel aad call, waxaad ka arki kartaa fursadaha waxtar leh kala duwan oo ay ka mid yihiin camera ku biiro, xidhi makarafoonka ama joojiyaan call. Apple ma bixiyaan adeegyada ay macaamiisha VOIP in Skype samayn.
Midaynta Face Time:
Apple ayaa gees ah si ay u dhexgalaan labada software-waxqabadka sare iyo hardware adeegyada video taleefoonka. Face Time waxaa loogu talagalay in natiijada la A-taxane siiyo "nidaamka on chip a" iyo camera iSight. Si ay u siiyaan natiijooyin muhiim ah video iyo wicitaanada, Face Time ma shaqeeyaan wax xiriir ah bandwidth hooseeyo.
Apple ayaa had iyo jeer ku dadaalaya adag tahay in la keeno tayo premium iyo apps natiijo-oriented cajiib ah si ay macaamiisheeda. Face Time waxaa sidoo kale loogu tala galay la falsafad isku mid ah Apple, ma waxaad ka heli kartaa qalad video saboolka ah iyo cod dhaco inta aad isgaarsiinta. Face Time ayaa loogu talagalay sida ay ecosystem dunida ee Apple.
Feature Tayada Face Time:
Apple ayaa had iyo jeer ku adkeeyay on tayada iyo heer sare ah adeegyada ay bixiyaan. Tani waa sababta ay sabab u tahay taas oo Waji Time leeyahay tayo fiican leh ka badan Skype tartan ay. Face Time waxay bixisaa adeegyada video taleefoonka oo tayo sare leh oo ku salaysan heerarka caalamiga ah.
Waayo, video iyo wicitaanada labada, Face Time bixiyaa si wanaagsan u qeexan, kala go ', dhawaaqa cad oo sawir firfircoon la mooshin siman.
Tani app la yaab leh ee Face Time aad u fasaxaya in ay sameeyaan xusuus qurxoonaa, inuu sii joogo xiran iyo si uu u gudbiyo farriimo.
isgaarsiinta ayaa si joogto ah oo wanaagsan oo tayo leh ayaa sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah marka aad leedahay wax aan run ahaantii muhiim ah in la gudbiyo, ama aad dooneyso in aad bixiso bandhigga ama aad dooneyso in aad macmiilka ka dhaadhiciyo la garoonka sale iyo liiska on tagaa.
Face Time iyo Skype, labadaba waa Chine cajiib ah qabashada video ama audio calls. Haddii aad tahay isticmaalaha qalabka Apple oo aad rabto in aad la kulanto tayada ugu fiican markaas waa in aad isticmaasho Face Time.
Hase yeshe,, haddii aad rabto in lala dad ka baxsan dunida aaladaha Apple markaas Skype waa doorashada ugu fiican ee kama dambaysta ah aad loogu talagalay.